Fanka | New City School
Growing Skilled & Caring Citizens in NE Minneapolis
Isku Darka Habab Kala Duwan
Aqriska iyo Qoritaanka
Alma – The Family/Student Portal
Eureka Math – Parent Support Resources
New City Circle (parent group)
Student Application and Handbook
Iskoolka New City Ujeedadu waa in wax lagu baro halka ay carruur joogaan iyo sida ay koox iyo sida shaqsiyaad ugu wanaagsan ee ay wax u bartaan. Waxaan casharado u barnaa siyaabo badan oo kala duwan oo hababka barashada ah (macquul ah, muuqaalka, muraayad u) si caruurta dhan wax looga qabto oo kala duwan barashadooda iyo awoodooda. Fikrada laga soo qaatay Howard Gardner iyo shaqada Elliot Eisner iyo jamacada Culumbia oo macalimiinta iyo manhajka farshaxan iyo kuwo kale oo badan casharadeena waxaa kudarnay farshaxanka. Carruurtu waxay u baahan yihiin albaabada kala duwan ee wax kubartaan iyo joogitaanka maalin kasta ee sheeko, sawirid, iyo heesaha, gabayada iyo dhaqdhaqaaq casharada oo siiyo arday kasta fursad si ugu qeybqaato.
Tusaale ahaan, ardayda waxay ku sameeyaan farshaxan la dhoobo inta ay ka baranayaan waxyaabo dhulka. Caruurta xanaanada wexee qaban riwaayado in ay ku fahmaan sida kala duwan oo xayawaanka u ku nool yahay. Fasalka shanaad iyo kan lixaad wexee sameeyaan isku toosiska sanduuq si ay u bartaan joomateri. Fasalka labaad wexee sameeyaan sawiro oo carruurta waddanka u soo guurey si ay akhriyaan sheekooyin iyo utixgeliyaan noloshooda. Sababt waxbarashada farshaxanka ku salaysan Thai ee u wangasantahay waa la xaqiijiyay.
Ardayda iskoolka New City iyo xubnaha shaqaalaha waxee lee yihiin fursad ee kaqeybqaataan dega aashaha farshanka sanad walbo. Ardayda waxee ka qayb qaateen wajiga sida loo sawiro, sida dhoobo wax looga sameeyo, barashada qoob ka ciyaaraha dhaqameed we dunida, samaynta buugaagta, quritaanla gabayaga, iyo turjumidda iyo lisitaanka gabayada. Fannaaniinta wexee joogaan bil dhamaan aayee ardayda iyo macalimiinta la shaqeeyaan. Macalimiinta seminar ay ku bartaan waxee ardayda ee baran doonaan. Macalimiintu waxay diyaarin eena kafarxiyaan ardaydooda oo lashaqeeni doona fanaaninta. Intaa waxaa dheer macalimiinta wixi ay barteen markii ee barnaamijka oo damaado. Waxaa la sameenaayaa dhacdo ee qoysaska, saxiibada iyo bulshada ay ka soo qebkali karaan si ay u arkaan shaqada ardayda ay sameeyeen.
New City wuxuu lasha qeeyaa MacPhail Center for the Arts si ay u bixiyaan casharo muusikada fasalada K- 8. Macalimiin ka socdo MacPhail ayaa yimaadaan New City toddobaad kasta si ay casharada muusik ubixiyaan. Fasallada hoose (K- 4) waxee ku diiraddaan qasiidooyinka muusikada, laxanka iyo dhaqdhaqaaqa, iyo sahaminta haysta alaabtii kala duwan. Fasalada saddexaad iyo kan afraad waxee bartaan si ay u ciyaaraan waxa duuban. Fasalada sare ee (5-8) ardaydu wexee ku bartaan sal jibaaranaha laxanka muusikada iyo halabuurka iyada oo casharro ka soo ifbaxaysa.
Si ay u sii daboolaan baahida barashada ee ardayda kala duwan, barnaamijka Ikhtiyaariyada ah ayaa la lasoo biyay. Waxaa si deg deg ah u noqday qayb ka mid ah aqoon sare filayinka sanad dugsiyeed. Barnaamijkan oo bixiya casharo oo aan ahayn casharada caadiga eh oo dhammaan ardayda iskuulka dhan ay qaataan. Macalimiinta waxaa lagu dhiirigelinayaa in ay baraan maado u saamaxaya iyaga si ay ula wadaagaan xirfad gaar u eh. Waalidiinta waxaa sidoo kale lagu casuumay in ay baraan maadooyin. Ardayda New City waxeey fiirinaayaan liska maadooyin markaas ay ka dooranaayaan maada oo xiiseenaayaan. Toddobaadkiiba hal mar, muddo 5 todobaad, qof walba maado ayuu diganaa. Dadka oo dhan waxee ay u guuraayaan qaybo ka mid ah dhismaha iyo dibadda ee fasallada sida skateboard, qaadashada xafiisyada, turubka, karatee, Jarmal, karinta, iyo qaar kaloo badan. Fasalada oo dhan waxee dhiirigeliyaan waxbarashada oo da’ada kala duwan. Tusaale ahaan, fasalka karinta, xannaanada waxee la bartaan fasalka sideedaad.